Ummbila - umkhiqizo wemvelo owavela engaphansi kwekhulu leminyaka edlule futhi awukakatholi ukudla kwaseRussia yamasiko amadala amakhulu. Naphezu kwalokhu, ummbila ekudleni kwethu kubaluleke kakhulu. Abaningi badla ummbila ngezindlela ezahlukene cishe nsuku zonke. Faka isicelo esimweni esisha, esomile, somhlabathi. Ngendlela yezidlo ezihlukahlukene, kufaka phakathi okusanhlamvu. Phela, izindawo eziwusizo zommbila wommbila, ummbila omusha noma owomathinini mkhulu kakhulu.
Ummbila we-Corn corn uphekwe emagqabeni okudla - amaqabunga ekhanda aphuzi ombala ophuzi nombala. Kungaba encane noma enkulu.
Ukusuka kumagilebhisi ama-corn hhayi kuphela okusanhlamvu okulungiselelwe, kodwa neminye imikhiqizo eminingi - ama-molasses, ufulawa, ummbila ogciniwe, isitashi, ubhiya, ama-corn flakes. Ummbila wesikhumba ngokwawo ulungiselelwe isikhathi eside kakhulu. Ukuxubha obomvu emanzini cishe ihora, futhi ngesikhathi sokubilisa ivolumu kungakhula ngezikhathi ezingu-3-4. Kulesi simo, iphariji, eliphekwe ngale ndlela, linenambithelo elithile futhi linzima kakhulu. Noma kunjalo, ezweni lakithi sithandwa kakhulu ngamapuni.
I-corn cereal icebile izakhi, okungukuthi amavithamini weqembu B, PP, E ne-vitamin A. Ngaphezu kwamavithamini aqukethe amaminerali - iron, i-silicon. Ama-amino acids kanye nezinye izinto eziphilayo zikhona emgodini wesikhumbi, futhi zibaluleke kakhulu emzimbeni wethu.
Ummbila kanye nesikhala endaweni yokuqala kuyaziwa ngamakhi ayo okukhipha - ususa emzimbeni womuntu izinto eziyingozi ezihlukahlukene, ubuthi kanye nama-radionuclides. Ngaphezu kwalokho, izindawo eziwusizo ze-porridge zihlanganisa nokugcinwa kwe-fibre yemvelo ewusizo kuwo, ngenxa yokuthi amathumbu nesisu ziyahlanzwa, futhi ukusebenza okujwayelekile kokugaya kuzogcinwa. Ngaphezu kwalokho, i-corn porridge iyidla ephansi-ikhalori, ngakho-ke abantu abafuna ukunciphisa isisindo, bangadla ngokuphepha ephepheni. Ngesikhathi esifanayo, lesi sidlo sinomsoco kakhulu, ngakho-ke ukulahlekelwa isisindo, ipilishi yamabele izoba nenzuzo enkulu. Ukwengeza, ukudla okusanhlamvu kukhona phakathi kwemikhiqizo ephansi-allergenic, ngakho-ke wonke umuntu angayisebenzisa - kokubili abantwana abancane nabantu abadala abanokuzwela okukhulu.
Ngokusebenzisa njalo amaphuji noma ummbila, ungathuthukisa isimo senqubo yesifo senhliziyo, unciphise ingozi yesifo senhliziyo.
Ummbila wesikhumbi unamakhemikhali abalulekile okubaluleke kakhulu - ikhono lokunciphisa i-cholesterol yegazi, ngakho-ke ukunciphisa ingozi yokushaya nokushaya kwenhliziyo.
Ummbila uqinisa ukuzivikela, unomthelela omuhle ekusetshenzisweni kwemithi futhi ukwazi ukugcina ibhalansi evamile emzimbeni. Ngaphezu kwakho konke lokhu, ummbila wesikhumba uzokusiza ukuthuthukisa isimo sesikhumba, ubuciko, impilo yamazinyo kanye nezinsini.
Izidakamizwa, ukukhipha inzuzo enkulu kakhulu yezindawo ezizuzisayo zezitshalo zommbila, kunconywa ukuba udle ummbila wesikhumba izikhathi eziningana ngesonto.
Ungakwazi yini ukubhekwa njengokudla okunempilo?
Izakhiwo eziwusizo ze-cloudberry
Izinhlobo zetiyi eluhlaza kanye nezakhiwo zazo ezizuzisayo
Izakhiwo zokwelapha okusanhlamvu nokusanhlamvu
Amajaji: azuze noma awonakele?
Ukudla okuwusizo nokuhlwabusayo
Isaladi likaHamu, ushizi nama-mushroom
Ungasho kanjani ukuthi uhambe kahle kumfana?
Isithasiselo iyisitho esingeziwe somzimba womuntu?
Isikhukhula sibangelwa ukuphathwa ikhanda
Amavithamini nsuku zonke kwabesifazane
Ukudla - ukulimaza noma ukuzuza?